Sport-U et Culture-U Inter-mention 1ère Edition prévue en juin-juillet
<Accueil > ACCUEIL > EVENEMENTS A VENIR > Sport-U et Culture-U Inter-mention 1ère Edition prévue en juin-juillet
Faly miarahaba anareo SEC PAL sy PRESIDENTS MPIANATRA,
Ny DOSC no mikarakara ny hetsika rehetra ara-panatanjahan-tena sy kolontsaina eto amin’ny Oniversite an’Antananarivo. Niova ny politika hampandrosoana ny sport sy culture amin’izao fotoana izao. Isan’izany ilay hoe "SPORT POUR TOUS" , izany hoe atao izay fomba hampitomboana ny tahan’ny mpandray anjara sy ny handraisan’ny rehetra anjara anatin’ny hetsika satria "anatin’ny vatana tomady no misy ny saina matsilo". Anatin’ny dingana fanomanana sy fanentanana isika amin’izao fotoana izao, izay hiarahanay miasa amin’ny DVU. izay indrindra ny antony handefasana ireto takelaka ireto hoantsika mba samy hifanentana ny rehetra.
1.Manomboka izao dia tsy misy intsony ny INTERFAC fa efa lasa fifaninana isaky ny mention ilay atao hoe "SPORT-U sy CULTURE-U".
2.Tsy mijanona fotsiny amin’ny maha fifaninana ara-panatanjahan-tena sy kolontsaina ny "SPORT-U sy CULTURE-U" fa isan’ny tanjona ihany koa ny fampahafanatarana ho an’ny Malagasy tsy vaky volo ireo karazana lalam-piofanana na "Mention" rehetra misy eto amin’ny Oniversite an’Antananarivo.
Araka izany dia ireto mipaingotra ireto ny takelaka (afisy) mahakasika ny hetsika ara-panatanjahan-tena amin’ity taona ity. Hivoaka amin’ny herinandro kosa ny CULTURE U izay hiavaka satria tsy ny mpianatra fotsiny no afaka mandray anjara fa hiditra ao ny PAT sy ny MPAMPIANATRA. Marihina fa ny hetsika rehetra dia omanina fa ny fanatanterahana azy dia miankina amin’ny fivoaran’ny COVID.
Zarao, ampitao, entano ireo tompon’andraikitra voakasika (mpianatra, PAT, MPAMPIANATRA) fa samy hiezaka isika hanatsara ny tontolon’ny fanatanjahan-tena sy kolontsaina ary hanatsara IZAY HITERAKA VOKATSOA GOAVANA ho an’ny mpianatra mandray anjara eo amin’ny lafiny fampianarana sy fikarohana
SOULEMAN IBRAHIM Andriamandimby
Directeur de l’Office des Sports et de la Culture,
033 64 613 13